Beijing Holtop Heat Recovery Vahaolana Rafitra fanamoriana rivotra madio
ERV / HRV trano fonenana
Manangana vokatra maro karazana rafitra rivotra madio-Manome vahaolana HVAC azo itokisana
Trano fonenana ERV/HRV
HOLTOP CFA Series Comfort Fresh Air HRV - Fanamafisana Hafanana Famerenana Hafanana
Series ERV tsy misy duct amin'ny rindrina
Fifanakalozan-drivotra indroa, fanarenana angovo, fanjifana ambany, fahaiza-sivana PM2.5>99%
DX COIL CONDITIONING AIR CONDITIONING UNIT/AHU
Rafitra Tsotra, Famerenana angovo, Desgin Flexible
Fahombiazana avo 95%, azo atao ny vatana, fiainana maharitra.
Rafitra fanamoriana rivotra madio mihantona ny valindrihana. Famolavolana mirindra, fanarenana angovo, sivana HEPA
Ataovy mahasalama kokoa sy mitsitsy angovo ny fitsaboana rivotra
Tamin'ny 17 Desambra 2021, dia natao tao amin'ny Hotely Intercontinental Kunming ny Holtop Products and Technology Exchange Conference. Mpamorona maherin'ny 120 sy namana mpivarotra avy any Yunnan no nanatrika ny hetsika. Ny lohahevitry ity fihaonambe ity dia “Mipoitra avy any Yundian, manorina tanàna nofinofy; manampahaizana manokana amin'ny sp......
Tamin'ny 17 Desambra 2021, dia natao tao amin'ny Hotely Intercontinental Kunming ny Holtop Products and Technology Exchange Conference. Mpamorona maherin'ny 120 sy namana mpivarotra avy any Yunnan no nanatrika ny hetsika. Ny lohahevitry ity fihaonambe ity dia “Mipoitra avy any Yundian, manorina tanàna nofinofy; manampahaizana manokana amin'ny sp.........
Arahabaina noho ny fahombiazan'ny fihaonamben'ny vokatra Holtop sy ny fifanakalozana teknolojia @Henan
Arahabaina noho ny fahombiazan'ny Holtop Products and Technology Exchange Conference @Henan Mr. Liu Mingshan, lehiben'ny injeniera ao amin'ny Holtop Group, dia nizara ny foto-kevitra momba ny famolavolana, ny tombony ara-teknika ary ny fampiharana amin'ny tetikasan'ny vokatra fanamafisam-peo marika Holtop. Holto.........
Heat sy ny angovo fanarenana rafitra ventilation
Ny fanafoanana ny hafanana sy ny fanafoanana ny angovo dia afaka manome rafitra fanamafisam-peo mahomby izay mampihena ny hamandoana sy ny fahaverezan'ny hafanana. Ny tombony amin'ny rafi-pamokarana hafanana sy angovo 1) mampihena ny fahaverezan'ny hafanana izy ireo ka kely kokoa ny fampidirana hafanana (avy amin'ny loharano hafa) ilaina mba hampiakatra ny .........
Ventilation: Iza no mila izany?
Satria ny fenitry ny kaody fanorenana vaovao dia mitarika ho amin'ny valopy trano henjana kokoa, ny trano dia mitaky vahaolana amin'ny rivotra mekanika mba hitazonana ny rivotra ao anaty trano vaovao. Ny valiny tsotra amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity dia na iza na iza (olona na biby) mipetraka sy miasa ao an-trano. Ny fanontaniana lehibe kokoa dia ny fomba handehanantsika amin'ny p.........
VAOVAO Toerana lehibe Tranom-panjakana am-pianarana hopitaly Residence Orinasa indostrialy any ampitan-dranomasina
Rongchuang rafitra rano 40# 41# faritra manodidina ny tanàna
Foibe Fivoriambe sy Fampirantiana Meijiang
Foibe ara-kolontsaina Binhai
Foibe fampirantiana lalao olaimpika sy paralimpika any Beijing
Toeram-panatanjahantena Olaimpika Chuzhou
Tranon-gazety anio alina
Huazhi Vientiane tontolo
Jinan midadasika band gap semiconductor tanàna indostria
Fitsaran'ny vahoaka ao amin'ny distrikan'i Dongming
Tianjin Zhongxin Ecological City North Normal University Affiliated Middle School
Yizhuang Sekoly tsy miova 12 taona any Beijing No. 2 sekoly ambaratonga faharoa
Sekoly Bilingual Tonglu Mifandray amin'ny Oniversite Normal Shina Atsinanana
Sampana Weihai ao amin'ny hopitaly Beijing
Hopitaly Vahoaka ao amin'ny distrikan'i Wuhan Huangpi
Lianyungang Donghai hopitaly reny sy zaza
Tranon'ny tobin'ny hopitaly Qianfo Mountain
Holtop DX Central Air Conditioner ho an'ny Ethiopian Airlines
Niorina tamin'ny 2002
Fahaizana famokarana isan-taona
Namidy tany amin'ny firenena 100+
Mitondra anao ao amin'ny Holtop Group
Tranobe avo be
Telefaonina: + 86-13602169707
158 HanJiaChuan, Distrika Haidian, Beijing, Sina